ကုန်သွယ်ရေးမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - Qingdao ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သတ္တဝါ, Ltd. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Degreaser & သန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ
သတ္တု Degreaser & Cleaner
nano ကူးပြောင်းခြင်း Coating
သံ & သံမဏိ
မေး: သင်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် Trading Company သနည်း
ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်း 20 အတွေ့အကြုံနှင့်အတူသတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ pretreatment ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖြတ်တောက်စက်ဆီချောဆီ, သံချေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန် degreasers & သန့်ရှင်းရေးကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကုသမှု chemcials phosphating အတွက်အထူးပြု။ ကုမ္ပဏီယခင် Qingdao ICON ဓာတု CO ဖြစ်ပါတယ်။ , TDL, 2015 ခုနှစ်, ငါတို့ CO Qingdao အချစ်သတ္တဝါပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနည်းပညာဖြစ်လာခဲ့သည်။ , LTD မှ။
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံ Liuting စက်မှုဇုန်အပိုင်း, Qingdao ၏ Chengyang ခရိုင်, တရုတ်တွင်တည်ရှိသည်။ Qingdao လေဆိပ်ကနေ 20 မိနစ်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုလိုလျှင်။ ကျနော်တို့ Qingdao ၌သင်တို့ကိုကောက်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
မေး: အိုင်တီအခမဲ့နမူနာ GET ရန်ဖြစ်နိုင်သည်? ပုံ WE အိုင်တီရနိုင်မလဲ?
ဟုတ်ပါတယ်, နမူနာ 3KG အတွင်းအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ နမူနာ unregular လမ်းအတွက်အထူးအေးဂျင့်မှတဆင့်ဆက်သားကစေလွှတ်လိမ့်မည်။ ဖောက်သည်များအမိန့်နေရာရသောအခါကျနော်တို့ဧကန်အမှန်ပမာဏကိုကနေကုန်ကျစရိတ်ကိုနုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ Western Union တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးပို့ဖို့ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါဟာလုံခြုံမြန်ဆန်စွာဖွင့်, အငယ်အပိုကိုင်တွယ်တာဝန်ခံရှိပါတယ်။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်, နမူနာ TNT, DHL သို့မဟုတ် EMS နေဖြင့်ချက်ချင်းထွက်စလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်ရောက်ရှိဖို့အကြောင်းကို 5-7 ရက်အတွင်းယူပါလိမ့်မယ်။
အရည်အမိန့်ကတဦးတည်း 20ft ကွန်တိန်နာများအတွက်အကြောင်းကို 15-20 ရက်အတွင်းယူတော်မူမည်
အမှုန့်အမိန့်ကတဦးတည်း 20ft ကွန်တိန်နာများအတွက်အကြောင်းကို 25-30 ရက်အတွင်းယူပါလိမ့်မယ်
1. T / T, 30% သိုက်, တင်ပို့မတိုင်မီသို့မဟုတ် B / L မိတ္တူဆန့်ကျင်ဟန်ချက်။
2. T / T, မျက်မှောက်မှာ, L / C အနေဖြင့် 30% သိုက်, 70% ။
ကုမ္ပဏီ: Qingdao ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သတ္တဝါ, Ltd. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Adress: No.6 WEIDESI လမ်း, LIUTING စက်မှုဇုန်များ, CHENGYANG ခရိုင်, Qingdao, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-0532-84810168
ဖြတ်တောက်ခြင်းထိုသတ္တုပြုလုပ်ခြင်းအရည်, F20-1 ထူးအိမ်သင်-ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ဆန့်ကျင်သံချေးရေနံ , Optical Glass ကိုသန့်ရှင်းရေးကိုယျစားလှယျ , လူမီနီယမ် passive, သတ္တုသည် Degreasing အေးဂျင့် , ရေနံဖြတ်တောက်ခြင်း၏စျေးနှုန်း ,